SomaliTalk.com » C/weli Gaas “khilaafaadka la isku heysto oo ah Odayaasha sax ma ahan…”
Ra’iisul Wasaaraha DFKMG ”Haddii aad Tihiin Odoyaasha Dhaqanka Masiirkii Ummada ayaa Gacantiina ku jira, Waqtiga waa Ciriiri ee Dedejiya Ansaxinta Dasuurka”
Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaaz oo ah Ra’iisul Wasaaraha dawladda federaalka KMG Soomaaliya ayaa manta la kulmay odoyaash Dhaqanka ee uu shirku uga soconayo Magaalada Muqdisho. Ra’iisul Wasaaraha ayaa ugu horeynba war bixino ka dhagaystay odoyaasha oo qaarkood Cabashooyin kala duwan ay soo gudbinayeen.
Odoyaasha ayaa sida ay wrarku nagu soo gaarayaan cabashadooda waxa ay u badneyd dhinaca farsamada iyo dib u dhacyo marar kale duwan ku yimid u soo bandhigidda qoraalka Dastuurka qabya qoraalka ah.
Cabdiweli Maxamed Cali Gaaz oo Odoyaashaas khudbad u jeediyay ayaa u sheegey in la dhamaynayo wixii Farsama Xuma ah ee jira isagoona dhankiisa ka codsaday maadaama uu waqtigu Ciriiri yahay in odoyaashu ay da dajiyaan Hawlaha ay iminka hayaan ee ah sidii ay u soo Xuli lahaayeen Ergadii Anisixin lahayd Dastuurka Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha ayaa xusay in la marayo waqti xasaasi ah isla markaana Masiirka Ummadda Soomaaliyeed uu maanta ku jiro Gacanta odoyaasha taasoo uu sheegey in iyagana looga baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan in ay arrintaa u da dajiyaan.
Kulankan uu maanta Ra’iisul Wasaaruhu ugu tagay Odoyaasha ayaa ah kii u horeeyay ee uu halkaa kula qaato tan iyo markii uu ka soo laabtay Safaradii uu ku tegay Dalka Turkiga.
Odoyaashan Dhaqanka ayaa xiligan looga fadhiyaa sidii ay u soo dhamays tiri lahaayeen Ergadii ansixin lahayd Dastuurka qabya qoraalka oo muddo hawlihiisa ay u fadhiyeen wuxuuna kulankaan ku soo beegmey Xilli uu is qab qabsi uu ka jiro Madaxda Sare ee Dowladda iyadoo Raiisul wsaaraha uu aamin san yahay in la kala direy Guddigii Dastuurka oo uu dhamaadey waqti kale oo laga dooda Dasuurka halka Madaxweynaha uu Aminsan yahay in aan la kala dirin Guddigaas ayna jirto doodii Dastuurka .
Warsaxaafadeed ka soo baxay DFKMG
Ra’iisul Wasaare Dr. Cabdiweli oo maanta booqday Odayaasha dhaqanka.